Bazi rezvekurima rakapa varimi kuti vatengese zvigadzirwa zvavo mumunda - "Potato System" magazini
kuru nhau State
Varimi vanobvumidzwa kuvhura zvitoro nekutengesa zvigadzirwa panzvimbo yavo - mumunda chaimo kana munzvimbo yemapurazi ezvipfuyo. Iyi danho rebazi rezvekurima rakagamuchirwa nekomisheni yehurumende yezvemitemo. Mushure mekufungisisa pamusangano weKabineti yeMakurukota, chirongwa ichi chichaendeswa kuHurumende Duma. Iye zvino tsika iyi inorambidzwa, iyo inogadzira zvimwe zvipingamupinyi pakutengesa zvigadzirwa zvepurazi uye zvinobatsira kumitengo yakakwira, nyanzvi dzinodaro
Chirongwa chebazi rezvekurima chingangotsigirwa neHurumende Duma, vakadaro vatevedzeri vemapoka akasiyana. Sekureva kwavo, sezvingabvira, inozotarisirwa neimba yepasi muchikamu chinotevera. Chokwadi, vagadziri vacho havana chokwadi kuti vatengi vanozokwanisa kusvika kune zhinji minda yavo, uye ivo vanoshevedza iyo pfungwa imwe chete yematanho munzira kwayo.
Bhiri rebazi rezvekurima rekubvumidza varimi kuvhura zvitoro pamunda wavo richaendeswa kuHurumende Duma mushure mekufungidzirwa pamusangano weKabineti, basa rezvenhau rehurumende yeRussia rakadoma. Ichi chirongwa chakatenderwa nehurumende Commission pane zvemitemo basa muna Chikumi 29.
Gwaro iri rinopa masimba kumapurazi evarimi nemubatanidzwa wezvekurima kuti vatengese zvigadzirwa panzvimbo yavo, akadaro Vladimir Gruzdev, nhengo yedare repamutemo, sachigaro webhodhi reRussian Lawyers 'Association.
Panguva imwecheteyo, muganho unopihwa, akadaro. Kuiswa kwezvitoro zvisina kumira zvakarambidzwa pazvikamu zvine chekuita nemunda unorimwa, ivhu rekudzosera kana inonyanya kukosha ivhu rekurima.
Mikana mitsva yevarimi yakakosha zvakanyanya nekuda kwematambudziko aripo ekudyidzana kwavo nemaketeni ezvitoro, akadaro mukuru wechikwata che Just Russia Sergei Mironov.
- Netiweki dzinotenga zvigadzirwa kubva kune vanotengesa nemitengo yakaderera, dzinodzosera zvigadzirwa zvisina kutengeswa kumashure, kuunza iyo inonzi "mari yekushambadzira", kumanikidza uye kuraira mazwi avo kune vagadziri. Iri ndiro dambudziko hombe, nekuti ndeapi mapurazi asingakwanise kupinda pasi pekutengesa huru. Hazvifanirwe kunge zvakadaro. Murimi anofanirwa kuve mukuru mukutenga chikafu kune vagari, - akadaro mutevedzeri.
Varimi vanofara nechero chirongwa chinovatendera kuti vawedzere nzira dzekutengesa, akadaro mukuru wenzvimbo yeSemigorye, sachigaro weUnited of Wine Farms Gennady Oparin.
- Mubvunzo chete ndewokuti ndeupi wevatengi achange akagadzirira kuenda kumurimi kunotenga zvigadzirwa mumunda? Chinhu chimwe chete kana munda wepurazi uri padyo nemugwagwa mukuru. Asi kana zvisiri, ndinofungidzira kuti mutengi achange akasununguka kuenda kure, ”akadaro.
Bhiri iri richaramba richiona hupenyu, uye mushure mekutanga kwayo kushanda, painenge ichiitwa, ichawedzeredzwa, anotenda Dmitry Uvarov, nhengo yeChikwata cheMagweta eRussia.
Tags: kutengesa zvigadzirwa mumundavarimi
Zviratidzo zvekunonoka kusvibiswa muminda mudunhu reVologda. Rosselkhoztsentr meseji
Mbatatisi nemabheet zvakadonha zvakanyanya